Ciidamada Dalka Ciraaq oo Gudaha u galay Tuulooyinka ka Horeeya Magaalada Mosul (VIDEO)
October 31, 2016 – Ciidamada dalka Ciraaq iyo Xulafadooda ayaa fooda galiyay tuuladii u dabbeysay, ka hor Magaalda Mosul, waxana ay ciidamada isku diyaarainayaan sidii ay gudaha u geli lahaayeen magaaladaasi Mosul oo ah magaalada labaad ee ugu weyn ee dalka Ciraaq.
Ciidamada sida gaarka u tababaran ee la dagaalanka Argagixisada ee loo yaqaano CTS ayaa magaalada u jirsatay 1.5 km, iyagoo gudaha u galay deegaanka Bazwaya oo ah tuuladii u dambeysay ee kaabiga ku heysa Mosul.
Wariye ka tirsan BBC-da oo la socda Ciidamada Ciraaq ayaa sheegaya in iska caabin ay la kulmeen, kuwaasoo ka mid ah baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo lagu weeraray kolonyada ciidamada wateen.
Ciidamo fara badan ayaa sidoo kale horumar ka sameeyaan dhinaca koofureed ee magaalada, waxaana laga yaabaa in maalinta berri ay duulaan ku qaadaan dhanka wabiga Tigris ee magaalada Mosul.
Milateriga dalka Ciraaq ayaa sheegay in haatan ay wiiqeen awoodii weyneyd ee kooxda Daacish oo ku xooganeyd magaaladaasi, waxaana la sheegayaa in saraakiishoodu ay isaga baxeen gudaha magaaladaasi.
November 1, 2016 tuugahaladilo2015